Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App 4.5.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.5.1 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား လူေနမႈပံုစံ Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App
Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
"ကမ္ဘာ့အများစုမှာနှောင့်အယှက်နှိုးစက်နာရီ app ကို, CNET အားဖြင့် featured, Gizmodo, Huffington ပို့စ်စသည်တို့ကို" ■
ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, နှင့်တောင်ကိုရီးယားအပါအဝင် 97 နိုင်ငံများအတွက်■ # 1 နှိုးစက်နာရီ App ကို။ (အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး)
■အင်္ဂါရပ်များ "ဓာတ်ပုံ Mode ကို" (အိပ်ရာထဲက Get နှင့်နှိုးစက်နာရီကို turn off မှမှတ်ပုံတင်ရာအရပျ၏ရုပ်ပုံယူ)
■ဒါ့အပြင် "သင်္ချာပြဿနာ mode ကို" (အသင်္ချာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့, နှိုးစက်နာရီကို turn off ရန်) နှင့် "Shake Mode ကို" (သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလှုပ်, နှိုးစက်နာရီကို turn off ရန်) ကိုပံ့ပိုး
သင့်ရဲ့နိုးစက်အဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂီတကစားခြင်းအားဖြင့် Customize ■ (အိပ်ပျော်ခြင်းငြိမ်းချမ်းစွာအဆုံးသတ်)
အဆိုပါနှိုးစက်နာရီကို turn off လုပ်နည်း■? (ပုံ mode ကိုပယ်ချ)
- သင်ကနှိုးစက်နာရီကို turn off ချင်ရာအရပ်၏ရုပ်ပုံကိုယူပါ။
- နှိုးစက်နာရီအူစတင်သည်တဲ့အခါမှာ, သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအရပ်သို့သွားနှင့်ရပ်တန့်ဖို့နှိုးဆော်သံအဘို့ပုံယူရပါလိမ့်မယ်။
- ရုပ်ပုံလွှာများအတွက်နေရာကောင်း: ဝေးအိပ်ရာထဲကနေ (ရေချိုးခန်းစုပ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်!)
- ရုပ်ပုံလွှာများအတွက်မကောင်းတဲ့နေရာအရပ်: အရောင်အဝါစသောအပြောင်းအလဲမကြာခဏသို့မဟုတ်သင့်အိပ်ရာနီးကပ်။
- လက်ရှိမှတ်ပုံတင်ထားနှိုးဆော်သံရုပ်ပုံလွှာကို turn off လွန်းလွယ်ကူပါတယ်သို့မဟုတ်လွန်းခက်ခဲသည်ဆိုလျှင်, နေရာအသစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ကျေးဇူးပြုပြီး :)
Alarmy (အိပ်စက်ခြင်းဦးနိုင်သလားဆိုပါက) ရုံပင်တစ်နှိုးစက်နာရီနှင့်အတူ, အချိန်ပေါ်တက်ရဖို့မထင်နိုငျသောသူတို့ကိုများအတွက်ဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုးဆော်သံ app ကိုပါးနသင်သည်အမျိုးမျိုးသောမစ်ရှင်ပေးခြင်းဖြင့်သင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှထွက်သငျသညျအတင်းဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကို mode ကိုများအတွက်, သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးဧရိယာသို့မဟုတ်အခန်း၏ဓာတ်ပုံမှတ်ပုံတင်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါနှိုးစက်ကိုသတ်မှတ်တစ်ချိန်ကထို့နောက်သူကအူကိုရပ်တန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါတစ်ခုတည်းသောလမ်းသည်သင်၏အိပ်ပျော်ရာမှနိုးနှင့်မှတ်ပုံတင်ဧရိယာ၏ဓာတ်ပုံကိုယူသှားပါသည်။ သင်တို့ကိုလည်းပိတ်ထားဖို့နှိုးစက်နာရီများအတွက်သင်္ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ရှိသည်ဘယ်မှာသင်္ချာပြဿနာ mode ကိုပါဝင်သည်။ သငျသညျကို turn off ဖို့နှိုးစက်နာရီများအတွက် (30 ကနေ 999 မှ) ကြိမ်ပမာဏတစ်ခုကြိုတင်လှုပ်ဖို့ရှိသည် "mode ကိုလှုပ်" သည်။
"ကမ္ဘာ့အများဆုံးနှောင့်အယှက်နှိုးစက်နာရီ" အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်, Alarmy လျင်မြန်စွာအသုံးပြုသူများသည်အကြားတစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးမိုဘိုင်းနှိုးဆော်သံ app ကိုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ Gizmodo, CNET, နှင့် Huffington Post မှာ featured, နှင့်ပြင်သစ်, ဂျာမနီနှင့်တောင်ကိုရီးယားအပါအဝင် 97 နိုင်ငံများအတွက်ယင်း၏ကဏ္ဍသည်လက်ရှိတွင် # 1 ဖြစ်ပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများအမှန်တကယ်ကဒီနှိုးစက် app ကိုခံစားနေကြခြင်းနှင့်လူများစွာနှိုးဆော်သံ app ကိုဖွင့်လိုအပ်ချက်များကိုန်းကျင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောနည်းလမ်းများကိုကြံစည်ပါပြီ။ သင်သည်သင်၏တည်နေရာအဖြစ်အိပ်ရာ၏ခွမှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင်သာအလုံအလောက်သင့်ရဲ့အိပ်ရာ၏ခွ၏ရုပ်ပုံကိုယူပြီးတော့အိပ်ပျော်ခြင်းမှလက်ျာဘက်ပြန်မသွားနှိုးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ၏သင်တန်း, ဒီလုံးဝ app ကို၏တပြင်လုံးကိုရည်ရွယ်ချက် circumvents ပေမယ့်အများအပြားအသုံးပြုသူများအတွက်ပျော်စရာ pastime ဖြစ်လာသည်။
အခြား alarm clock ထကျ သာ. ကောငျးအလုပ်လုပ်တယ်
အသုံးပြုသူများသည်အတူတက်လာကြပြီအခြားဖန်တီးမှုတည်နေရာကသူတို့ရဲ့အခန်း၏မျက်နှာကျက်တစ်ညစဉ်, သို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ပါဝင်သည်။ သင်အမှန်တကယ်အချိန်ပေါ်တက်ရတဲ့အကြောင်းပိုမိုလေးနက်နေလျှင်, ဘယ်လိုပုံနှိုးဆော်သံများအတွက်မီးဖိုချောင်ထဲမှာရေချိုးခန်းစုပ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကို item မှတ်ပုံတင်ကော?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိုးဆော်သံ app ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးဖြစ်စေခဲ့သည်ခဲ့ပြီးတကယ်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်သော်လည်း, ကကျိန်းသေအိပ်ပျော်ခြင်းမှထွက်သငျသညျအတင်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလုံးဝအရေးပါသောချိန်းသို့မဟုတ်အလုပ်အင်တာဗျူးအတွက်အချိန်ပေါ်တက်ရရမည်ဆိုပါက, သို့ဖြစ်လျှင်ဤနှိုးစက်နာရီပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
- Alarmy အသုံးပြုသူများအရုပ်ပုံယူလိုအပ်ပါတယ်သောရုပ်ပုံနှိုးဆော်သံကို turn off နည်းလမ်း, အဘို့ဤခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်
- Alarmy အဆိုပါနှိုးစက်ကိုအဘို့အပြင်ပဖုန်းမြည်သံ load ဤခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
- Alarmy နည်းလမ်းနှိုးဆော်သံကို turn off ပုံကိုအသုံးပြုနေသူကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ယူဓါတ်ပုံတွေကိုကယ်ဖို့ကဒီခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်
- ထိုနှိုးဆော်သံကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးပြီးနောက် Alarmy ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ဒီခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။
- ALARMY ဖယ်ရှားရန်ထံမှနှိုးဆော်သံ app ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကဒီခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်
- ဤနှိုးဆော်သံ app ကို Device Manager ခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်
Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
official-app စတိုး 928 855.21k
Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.5.1
ထုတ်လုပ်သူ Malang Studio Co, Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://alar.my/privacy_policy_en.txt
App Name: Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App
Release date: 2018-12-18 20:58:35
လက်မှတ် SHA1: 5A:08:7E:32:42:C4:DB:FF:45:08:8C:4A:F6:16:06:1E:4A:30:4E:61
ထုတ်လုပ်သူ (CN): 2
Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ